gPodder: Waa macmiil Podcast fudud | Laga soo bilaabo Linux
Waa inaan qirto inaanan aad u jeclaan podcasts ilaa aan bilaabay dhageysiga dadka sida @podcastlinux y @Samee podcastTan iyo markaas waxaan la qabatimay iyaga haddana hadda ma raaco oo keliya barnaamijyada laga soo qaado aagga Linux laakiin xitaa waxaan wax ka barto karinta. Waxaa jira wax badan oo ka mid ah macaamiisha podcast ee Linux, mid kasta oo leh faa'iidooyinkiisa iyo faa'iido darrooyinkiisa, ee loogu talagalay kuwa jecel fududaanta ikhtiyaar wanaagsan ayaa laga yaabaa inay tahay gPodder.
1 Waa maxay gPodder?
2 Sidee loo rakibaa gPodder?
Waa maxay gPodder?
Waa a macmiil fudud oo wax ku ool ah oo loogu talagalay Linux, ilo furan iyo horumariyo iyadoo la adeegsanayo Python taas ayaa noo oggolaaneysa soo dejiso oo dhagayso podcast hab fudud oo dhakhso leh. Waxay leedahay interface fudud oo fudud iyo qaabab lagu daro podcasts qaab fudud, si la mid ah, waxay leedahay matoorada raadinta podcast-ka iyo isdhexgalka Soundcloud iyo gpodder.net.
Qalabka ogolaanaya soo dejinta iyo dhoofinta OPML, soo dejiso cutubyada cusub ee boodhadhka aan ku darnay, marka lagu daro inaad liis garaynayso liiska cutubyada la heli karo. Waxaan sidoo kale ku dari karnaa aaladda YouTube-ka ama si fudud ayaan ugu dari karnaa boodhadhka gaarka loo leeyahay ee aan rabno.
Dib-u-soo-celinta Podcast ee qalabkani waa mid fudud oo hufan, waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku dhex booddo inta u dhexeysa cutubyada, hakad, hore ama gadaal, iyo sidoo kale maareynta rakibidda waxyaabo lagu daro haddii loo baahdo. Waxay leedahay maamule soo dejin saaxiibtinimo leh, oo leh bar nala socodsiinaysa wax kasta oo la xiriira maaraynta boodhadhkayaga.
Sidee loo rakibaa gPodder?
Habka ugu fudud ee loo rakibo gPodder wuxuu la socdaa rasmiga rasmiga ah ee 'PPA' ee arjiga, loogu talagalay Ubuntu-ku-saleysan distros kaliya waxay maamushaa amarrada soo socda:
sudo add-apt-repository ppa: thp / gpodder sudo apt-get cusboonaysiinta sudo apt rakib gpodder
Inta hartay ee hargabka waa inaan ka rakibnaa gpodder-ka bakhaarada git, si tan loo sameeyo amarada soo socda:
git clone https://github.com/gpodder/gpodder.git cd gpodder python qalabka / localdepends.py # Si loo rakibo waxyaabaha ku tiirsan ee lagama maarmaanka u ah bin / gpodder # Inaad awoodid inaad ku shaqeyso terminal
Shaki la'aan, tani waa ikhtiyaar si heer sare ah loogu taliyay dhammaan kuwa isticmaala kuwa doonaya inay ku raaxaystaan ​​soo dejinta iyo dhageysiga boodhadhka iyada oo aan loo baahnayn codsiyo aad u adag iyo in la wanaajiyo qadarka kheyraadka la cuno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » gPodder: Waa macmiil Podcast fudud
Maqaal aad u xiiso badan, ayaan fiirin doonaa. Mahadsanid
Juan Reta dijo
Waxay ahayd tii aan ugu jeclaa, illaa Clementine uu isku daray adeegga Podcast iyo adeegyada kale ee daruuraha.
Jawaab Juan Reta
Shakhsiyan, ma aqaano waxa podcastku yahay, laakiin aan aragno sida uu yahay.
Ku jawaab deibis contreras
Waa idaacad la dalbado. Gpodderna waa maamule aad u fiican.
waad ku mahadsantahay macluumaadka. Waxaan baran doonaa sida loo isticmaalo ka dibna waxaan arkayaa sida loogu sameeyo Clementine, oo ah ciyaaryahanka aan ugu jeclahay.
Ku jawaab joornaal madow
Sida loo rakibo League of Legends Linux (Wine + Winetricks + PlayOnLinux]